လမ်းပြကြယ်: (11th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
(11th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို
Free "Min Ko Naing" and all political prisoners now!!!
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွတ် ပေးပါ။
ပြည်သူ.မျှော်လင်.ချက် လွှတ်တော်ကဖော်ဆောင်ရွက်...ဆိုတဲ.အတိုင်းပြည်သူ.ဆန္ဒကို ချက်ခြင်းအကောင်ထည်ဖေါ်ပေးပါ။နောင်လာနောက်သားတွေကိုကောင်းမွန်တဲ.အမွေ တွေကိုပေးခဲ.တယ်ဆိုတာသမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းမှာတင်ကျန်နိုင်အောင်ကြုံတောင်.ကြုံခဲ ဒီအချိန်ခါမှာလက်တွေ.လက်ငင်းအကောင်ထည်ဖော်ပေးပါ။ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးချက်ခြင်းလွှတ်ပေးပါ။
ယုံကြည်ချက်အတွက် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး အမြန်လွှတ်ပေးပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မကြာမီအချိန်တွင်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဟီလာရီ ကလင်တန်က ယနေ့ညနေ နေပြည်တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောလိုက်သည်။ This news was Dec 1st, today is Dec 10st မကြာမီ.......???????? how long we can wait????? JUST DO IT NOW!!!!!!!!!
ပြည်သူ့အသံကို လေးစားရင် ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ ။ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။.......
မင်းကိုနိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး..ကို ချွှင်းချက်မရှိလွတ်ပေးပါ~~~~
ခွေးသားကို ဆိတ်ခေါင်းချိတ်ပြီးရောင်းတဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရ...
FREE MIN KO NAING AND ALL POLITICAL PRISONERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FREE KO MIN KO NAING AND ALL POLITICAL PRISONERS... NOW!!!!!!!!!!!!!!!!
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွတ် ပေးပါ...
သိန်းပြောင် နဲ...ကြေးမန်း..မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် တစ်ဘ၀လုံး ပေးဆပ် ထားတဲ..ငါတို.ရဲ.ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အကိုကြီး မင်းကိုနိုင်နှင်..အကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ..
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ (2011.DEC.１１) １１:０1pm Japan Standard Time.